Moringa Exporter & Private Label Moringa ထုတ်လုပ်ခြင်း။ - Moringa Wholesale Supplier Exporter | Private Label Moringa Manufacture | Moringa Powder - Moringa Leaves - Moringa Oleifera Capsule | Daun Kelor Grosir
Home / Info Lombok Gili / Moringa Exporter & Private Label Moringa ထုတ်လုပ်ခြင်း။
Moringa Exporter & Private Label Moringa ထုတ်လုပ်ခြင်း။
သင့်ကိုယ်ပိုင် Moringa ထုတ်ကုန်ကို ပြုလုပ်လိုပါသလား။
သတင်းကောင်း! Moringa Oleifera ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် / ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် Moringa / အဖြူရောင်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြု၍ Moringa အချောထည်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ သင့်အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် အပြီးသတ်ထုပ်ပိုးထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်လက်ခံရရှိရုံသာဖြစ်သည်။
B2C ကုမ္ပဏီများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ ဟိုတယ်နှင့် ကော်ဖီဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်ကွင်းဆက်ပိုင်ရှင်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ စသည်တို့အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ whatsapp နံပါတ် +62-877-5801-6000 မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Ccmpany သည် အော်ဂဲနစ် Moringa အရွက်မှုန့်၊ Moringa အစေ့များနှင့် Moringa ဆီ၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူ၊ တင်သွင်းသူနှင့် တင်ပို့ရောင်းချသူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Moringa ထုတ်ကုန်များကို တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Moringa ခြံများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော Moringa ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အော်ဂဲနစ် Moringa အရွက်မှုန့်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း 20 ကျော်သို့ တင်ပို့ရောင်းချပါသည်။
ထိပ်တန်းအာဟာရအမှတ်တံဆိပ်အများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Moringa အရွက်မှုန့်ကို ၎င်းတို့၏ဖော်မြူလာများတွင် အသုံးပြုနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Moringa ခြံနှင့် စက်ရုံသည် အင်ဒိုနီးရှားရှိ West Nusa Tenggara ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရာနှင့်ချီသော တောင်သူလယ်သမားငယ်များနှင့် အလုပ်လုပ်ပြီး အပူပိုင်းရာသီဥတုတွင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးမြင့် Moringa ကို မွေးမြူရန်အတွက် တရားမျှတသောကုန်သွယ်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြီးပြည့်စုံသော ပွင့်လင်းသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးကို မူလအစရှိသည့် လယ်မြေသို့ ပြန်လည်ခြေရာခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရင်းအမြစ်မှ တိုက်ရိုက် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Organic Moringa ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အရွယ်အစားသေးငယ်သော်လည်း Moringa အရွက်သည် အရေးကြီးသော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ တကယ်တော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက မှော်သစ်ပင် (Miracle Tree) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Moringa အရွက်သည် ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး သေးငယ်သော အညှာပေါ်တွင် သပ်ရပ်စွာ စီထားကာ ကုသရန်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြစ် ချက်ပြုတ်လေ့ရှိသည်။ Moringa အရွက်၏ ထိရောက်မှု သုတေသနကို အရွက်၊ ထို့နောက် အခေါက်၊ အသီးနှင့် အစေ့များတွင် ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့သည်။
ငှက်ပျောသီးထက် ပိုတက်စီယမ် ၃ ဆ၊ နို့ထက် ကယ်လ်စီယမ် လေးဆ၊ ဗီတာမင်အေ ခုနစ်ဆ ပိုတက်စီယမ် ပါဝင်တဲ့ Moringa အရွက်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က နို့စို့အရွယ်ကလေးငယ်တွေကို စားသုံးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ လိမ္မော်သီးထက် C ၊ မုန်လာဥနီထက် ဗီတာမင် A လေးဆ၊ နို့ထက် ပရိုတင်းနှစ်ဆ ပိုပါတယ်။
Moringa အရွက်၏ အရေးကြီးသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် Moringa အပင်အား အံ့ဖွယ်အပင်အဖြစ် WHO မှ အမည်ပေးခဲ့သည်။ En.wikipedia.org တွင် လေ့လာမှုများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့် အစီရင်ခံစာပေါင်း 1,300 ကျော်သည် Moringa ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများနှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည့် Moringa ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ၎င်း၏ကုသနိုင်စွမ်းကို ရှင်းပြထားသည်။ Moringa အပင်၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းနီးပါးတွင် အရေးပါသော ဂုဏ်သတ္တိများ ပါရှိပြီး နည်းလမ်းများစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။
မေ့မထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ မျှတနေဖို့ပါပဲ။ Moringa Tea သည် ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံးသော ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုအတွက် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည့် အစာခြေပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ပြုလုပ်သော လေ့လာမှုများအရ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Moringa အရွက်မှပြုလုပ်ထားသော လက်ဖက်ခြောက်တွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သော polyphenols မြင့်မားစွာပါရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ခုခံအားစနစ်ကို အားကောင်းစေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ။
ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သော Moringa အရွက်အနည်းငယ်ကို အခွံခွာပြီး ညက်ညက်ညက်ညက်ကြေအောင် ညက်ညက်ညက်ညက်ကြေအောင် ညက်ညက်ညက်ညက်ကြေအောင် ကြိတ်ချေပြီး အမှုန့်အဖြစ်အသုံးပြု၍ အချို့နိုင်ငံများတွင် Moringa Extract ကို အလှကုန်ပြုလုပ်ရန် ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ အရေပြား။ အရေပြားအတွက် အသုံးများသော Moringa အပင်၏ အစိတ်အပိုင်းများမှာ အခေါက်၊ အရွက်၊ အပွင့်နှင့် အစေ့များဖြစ်သည်။
Moringa အရွက်မှာ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ ကြေးနီ၊ သံဓာတ်၊ ဇင့်(ဇင့်)၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဆီလီကာနဲ့ မန်းဂနိစ်စတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Moringa ရွက်သည် သဘာဝအစိုဓာတ်ထိန်းဆေးလည်းဖြစ်နိုင်ပြီး အရေပြားဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို သန့်စင်စေပါသည်။
Moringa အရွက်မှာ အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ antioxidants 30 ကျော် ပါဝင်ပါတယ်။ Moringa အရွက်တွင် သတ္တုဓာတ်နှင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အရေပြားတစ်ရှူးအားလုံး၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါသော ကော်လာဂျင်နှင့် ပရိုတင်း keratin ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Moringa oil ကို ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များအတွက် ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် နာမည်ကြီး အလှကုန် အမှတ်တံဆိပ်များစွာ ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် အရွယ်တင်နုပျိုစေသော ခရင်မ်များ၊ အရေးအကြောင်းများကို သက်သာစေသော လိမ်းဆေးများ၊ ရနံ့ကုထုံးဆီများ၊ မျက်နှာအမြှုပ်များ၊ လိမ်းဆေးများ၊ ပေါ့ပါးသော ခရင်မ်များနှင့် အနံ့ဆိုးထွက်ဆေးများ ကဲ့သို့သော အသားအရေထိန်းပစ္စည်းများ။
Moringa အပင်၏ အကျိုးကျေးဇူးများသည် Moringa အရွက်၊ Moringa oil မှ Moringa ပန်းအထိ အရေပြားကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Moringa ပန်းများကို အလှကုန်နှင့် ရေမွှေး၊ colognes၊ ဆံပင်ဆီနှင့် ရနံ့ကုထုံးအဆီများအတွက် ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ Moringa ပန်းများတွင် oleic acid မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပြီး အဆီအဖြစ် ကောင်းမွန်စွာ သန့်စင်ပေးသည်။ Moringa ပန်းဆီသည် အနံ့ကို စုပ်ယူပြီး ထိန်းသိမ်းရန် အားကိုးနိုင်သည်။
Moringa အရွက်ကို အလှအပအတွက် အသုံးပြုပါ။
ဘယ်လိုလဲ? ပထမဦးစွာ Moringa အရွက်ကိုထောင်းပါ။ အကိုင်းမှခွဲ၍ စိမ်းလန်းပြီး လတ်ဆတ်သေးသော Moringa အရွက်ကို ရွေးချယ်ပါ။ Moringa အရွက်ကို ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး သန့်စင်ထားပါ (ဒါမှ Moringa အရွက်ကို ကပ်ပါ)။ ထို့နောက် Mask အဖြစ် အသုံးပြု၍ Moringa ရွက်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၃ ရက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
Moringa အရွက်သည် နို့တိုက်မိခင်များနှင့် ကလေးများအတွက် အာဟာရဖြစ်စေပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားတွင် Moringa အပင်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ထွန်းမှုသည် နိုင်ငံခြားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတော်လေး နောက်ကျနေပါသည်။ သို့သော်လည်း ပြည်တွင်းနှင့် ပို့ကုန်ဈေးကွက်ဝေစုအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အခွင့်အလမ်းရှိနေသေးသည်။ နို့တိုက်မိခင်များနှင့် ကလေးများအတွက် Moringa အပင်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများအတွက် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် အလားအလာကောင်းရှိပါသည်။
Moringa အရွက်မှာ ပရိုတင်း၊ သံဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင် C တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နို့တိုက်မိခင်တွေကို မိခင်နို့ပိုထုတ်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ flavonoid ဒြပ်စင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှုက မိခင်နို့ကို အရည်အသွေးကောင်းစေသည်။
ဟင်းနုနွယ်ရွက်ထက် 25 ဆ မြင့်မားသော သံဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး ဓမ္မတာလာနေသော အမျိုးသမီးများ ယေဘုယျအားဖြင့် သံဓာတ်များစွာ ဆုံးရှုံးလေ့ရှိသော ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် မိခင်များ စားသုံးရန် အကြံပြုထားသည်။ ကလေးများအတွက် ၊ ခြောက်လအထက်ကလေးငယ်များမှစ၍ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အထူးသဖြင့် ပထမသုံးလပတ်တွင် Moringaရွက်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Moringa အရွက်မှာ ဗီတာမင် A ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် မျက်လုံးအတွက် အလွန်ကောင်းပါတယ်။ Moringa အရွက်ကို စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် မျက်လုံးအင်္ဂါများကို အမြဲကျန်းမာကြည်လင်စေပါသည်။
Moringa ရွက်ကို မျက်စိရောဂါများ ကုသရာတွင် အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ Moringa အရွက်မှာ ဗီတာမင် A နဲ့ ကယ်လ်စီယမ် ဓါတ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
Moringa အရွက်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် A က အပေါင်း၊ အနုတ်၊ ဆလင်ဒါနဲ့ အတွင်းတိမ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချဖို့စပြီး မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ Moringa အရွက်သည် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များ စားသုံးသောအခါတွင်လည်း ကောင်းမွန်ပြီး မျက်စိကြည်လင်စေပါသည်။
Antioxidant နှင့် Anti-inflammatory ဒြပ်ပေါင်းများ။
Asia Pacific Journal of Cancer Prevention တွင် ထုတ်ဝေသည့် အစီရင်ခံစာအရ Moringa အရွက်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ carotenoid phytonutrients၊ quercetin ကဲ့သို့ antioxidants နှင့် ရောင်ရမ်းမှု သက်သာစေသော ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးများကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သော သဘာဝ ဘက်တီးရီးယားဒြပ်ပေါင်းများ ရောစပ်ပါဝင်ပါသည်။
Moringa အရွက်မှာ oxidative stress နဲ့ ရောင်ရမ်းမှုရဲ့ အာနိသင်တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုလီဖီနိုလစ်ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဘီတာကာရိုတင်း၊ quercetin နှင့် chlorogenic acid များပါ၀င်ခြင်းကြောင့် အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းများသည် အစာအိမ်၊ အဆုတ်၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါကဲ့သို့သော နာတာရှည်ရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအချက်များကြောင့် မျက်စိရောဂါ။ အသက်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးခြင်းက ကျောက်ကပ်ကို ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အလိုအလျောက် ကူညီပေးပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာများ (အဆီများတဲ့ အစားအစာများ) ဟာ ကျောက်ကပ်မှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ Moringa အရွက်ကို စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
Journal of Food Science and Technology တွင်ထုတ်ဝေသည့် 2014 လေ့လာမှုတစ်ခုသည် Moringa ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အဖိုးတန် antioxidant enzymes အဆင့်ဆင့်ကို သိရှိပြီး Moringa အရွက်သည် ဟော်မုန်းများကို သဘာဝအတိုင်း ထိန်းညှိပေးနိုင်သော သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သော antioxidants များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကို နှေးကွေးစေခြင်း ရှိ၊ မရှိ စူးစမ်းလေ့လာလိုကြသည်။
လေ့လာမှုတွင် သွေးဆုံးပြီး အသက် ၄၅ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်ကြား အမျိုးသမီး ကိုးဆယ်ကို အုပ်စုသုံးစုခွဲကာ ဖြည့်စွက်စာ အဆင့်အမျိုးမျိုး ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ရလဒ်များအရ Moringa နှင့် ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကို ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းသည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဒြပ်ပေါင်းများ သိသိသာသာ တိုးလာစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေသော အာနိသင်ကို နှေးကွေးစေသည့် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း ရလဒ်များက ပြသခဲ့သည်။
ဒူလာရောဂါ ကုသရာတွင် Moringaရွက်ကို ဒူလာရောဂါ ကုသရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒူလာရောဂါကို ကုသရာတွင် Moringa အရွက်ကို အသုံးပြု၍ အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် အဆစ်များတွင် ယူရစ်အက်ဆစ်များ စုပုံလာခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် ဒူလာရောဂါ သို့မဟုတ် ဂေါက်ပြဿနာကို ကျော်လွှားရာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒီ Moringa ရွက်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ဒူလာ၊ အကိုက်အခဲ၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း စတာတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် “ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစားအသောက်ဂျာနယ်” တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန် လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် Moringa အရွက်သည် နှလုံးပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး antioxidant အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင်၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် 200 မီလီဂရမ်ကို ရက်ပေါင်း 30 ကြာ သောက်သုံးခြင်းသည် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းကို လျော့နည်းစေပြီး နှလုံးတစ်သျှူးများ၏ တည်ဆောက်ပုံပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ Moringa အရွက်သည် နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု သုတေသီများက သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကို ခိုင်မာစေရန်အတွက် နောက်ထပ်သုတေသနများ လိုအပ်နေသေးသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် Moringa Leaves ၏အကျိုးကျေးဇူးများ။
အမျိုးသမီးများအတွက် Moringaရွက်ကို စားသုံးခြင်းသည် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပေ။ Moringa အရွက်သည် အမျိုးသမီး မျိုးပွားအင်္ဂါများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေအတွက် Moringa အရွက်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သည်;
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများတွင် သွေးအားနည်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
သွေးအားနည်းရောဂါသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် အန္တရာယ်များသောရောဂါဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးပမာဏဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သယ်လာတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကလေးမွေးဖွားစဉ်တွင် သွေးအားနည်းရောဂါသည် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများတွင် သွေးအားနည်းခြင်းအန္တရာယ်ကို ကျော်လွှားရန်အတွက် Moringaရွက်ကို စားသုံးခြင်းသည် အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ Moringa အရွက်မှာ ဟေမိုဂလိုဘင်ကို တိုးမြင့်ပေးနိုင်တာကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်းအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများတွင် ရှုပ်ထွေးမှုအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ရှုပ်ထွေးမှုများသည် မည်သူမဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒီလိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အာဟာရဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်တွေကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ Moringa အရွက်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအစာရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအရွက်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်နဲ့ သတ္တုဓာတ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့်ပါ။
ကလေးမွေးပြီးရင် မိခင်နို့က အဓိကစားသုံးတဲ့ အစားအစာဖြစ်လို့ မိခင်နို့က လိုအပ်တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း မိခင်နို့မထုတ်နိုင်ပါဘူး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ နို့ထွက်နိုင်စေဖို့ booster အရင်လိုအပ်ပါတယ်။
Moringa အရွက်သည် katuk အရွက်နှင့်တူညီသော galactogogue အာနိသင်ရှိသည်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုက မိခင်နို့ထွက်ရှိမှုကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ မိခင်နို့ များများတိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကလေး၏ အာဟာရလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
သွေးဆုံးပြီးနောက်တွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။
Estrogen ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ပမာဏကို အမှန်တကယ် လျှော့ချနိုင်သည်။ ဤဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို တိုးပွားစေရန်အတွက် ဂျုံယာဂုပုံစံဖြင့် Moringaရွက်ကို စားသုံးရန် အကြံပြုထားသည်။ Moringa အရွက်သည် ကျန်းမာသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အရေးကြီးသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို တိုးမြှင့်ပေးသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
Moringa အရွက်ကို မှန်ကန်စွာ စီမံနည်း
Moringa အရွက်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ထိန်းထားနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ သိထားရပါမယ်။ Moringa အရွက်ကို နည်းစနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
Moringa အရွက်ကို ဤနည်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ပါ။ Moringa အရွက်တွေ ခြောက်အောင် သေချာထားရပါမယ်။ ပြီးရင် Moringa ရွက်ကို ခွက်တစ်ခုထဲမှာ ထည့်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဖျော်လိုသလို ချက်ပါ။ အရသာထည့်ရန် သကြား သို့မဟုတ် ပျားရည်ကိုလည်း ထည့်နိုင်သည်။
ဤနည်းလမ်းသည် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤနည်းဖြင့် Moringa အရွက်၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြုတ်ထားတဲ့ရေကို သောက်နိုင်ပြီး အရွက်ပြုတ်ကို သုပ်စားနိုင်ပါတယ်။
Moringa အရွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် အရသာရှိရုံသာမက အကျိုးကျေးဇူးများလည်း ကြွယ်ဝပါသည်။ Moringa အရွက်ကို ချိုမြိန်သော ပြောင်းဖူးနှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အရသာပို၍ အရသာရှိစေပါသည်။
သတင်းကောင်း! Moringa Oleifera ထုတ်ကုန်၏ သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်/ သီးသန့်တံဆိပ် Moringa/ အဖြူရောင်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြု၍ Moringa အချောထည်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည် – ဖုန်း/ whatsapp မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ – +62-877-5801-6000
Previous post: Та өөрийн Моринга бүтээгдэхүүн хийхийг хүсч байна уу?
Next post: के तपाई आफ्नै मोरिंगा उत्पादन बनाउन चाहनुहुन्छ?